समाज – Nagarik Today
धादिङ — श्रीमानको मृत्युपछि श्रीमतीले रातो लगाउन नहुने मान्यता हामो समाजमा छ । तर धादिङको थाक्रे गाउँपालिकाका एकल महिलाले यो रुढिवादी संस्कारलाई तोड्दै सामुहिक रुपमा रातो टीका र लुगा लगाएका छन् । श्रीमानको निधनपछि सेतो मात्रै लगाएर बस्नुपर्ने परम्पराका कारण अपहेलित हुनु परेकाले सबै महिला एक ठाउँमा भेला भएर रातो लगाइएको स्थानीय एक महिला गोमा तामाङले बताईन् । watch viagra work. समाजको नकारत्मक सोच हटाउन एकल महिला एक भएर अग्रसर हुनु जरुरी छ, उनले भनिन्, श्रीमानलाई गुमाउनुपर्दाको पीडा बिर्साउन र समाजमा सम्मानपुर्वक बाँच्न हामीहरु रातो पहिरनमा सजिएका छौँ । श्रीमानको मृत्युपश्चात् चुरापोते, सिन्दुर, टीका र रातो कपडा लगाउनु हुन्न भन्ने कुप्रचलन विरु यहाँका महिला जुर्मराएका छन् ।, आजको नागरिक दैनिकमा यो खबर छ ।
“५ वर्षमा ५ वटा दिर्घकालीन काम, ५ ठूला भ्रष्टाचारीलाई जेल हाल्नुहोस्, विजुलीको पोलमा फोटो टाँस्नै पर्दैन” – रबि लामिछाने
नागरिक बिचार, राजनीति, समाज
काठमाण्डौ, ११ मङ्सीर । आज दिनभर नयाँ युगको चर्चा छ । सरकारले श्रमिकका लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरुक्षा योजना घोषणा गरेको छ । यो घोषणालाई सरकारले नयाँ युगको संज्ञा दिएको छ । रोजगारदाताले श्रमिकको बेसिक तलबबाट ११ प्रतिशत रकम कट्टी गरेर सो रकममा २० प्रतिशत रकम थप गरी कुल ३१ प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गर्नेछन् । जम्मा हुने रकमबाट कामदारलाई पेन्सन, अवकास, सुविधाको साथमा काम गरेको ठाँउमा हुने दुर्घटनाको बीमा, उपचार खर्च र परिवारका लागि विभिन्न सुविधाको घोषणा गरेको छ । यो प्रयास अत्यन्त राम्रो हो । यसको कार्यान्वयन चुनौती नै चुनौती छन्, जसलाई आउने कार्यक्रमहरुमा व्याख्या गरौँला । तर जुन तामझाम गरेर कार्यक्रमको घोषणा गरियो, त्यसको आवश्यकता थियो त ? एउटा ज्यादै राम्रो कार्यक्रमको शुभारम्भ मात्र हुँदा त्यसलाई नयाँ युगको शुरुवात भनिुन, अनि करोडौँ खर्च गरेर त्यसको विज्ञापन गरिनु, शहरका पोल पोलमा प
निर्मलाका बुवा भेट्न नगद सहयोग सहित अस्पताल पुगे पूर्व प्रधानमन्त्री डा. भट्टराई
काठमाडौं, १० मंसिर । कञ्चनपुरमा बलात्कार पछि हत्या गरिएकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तका बुवालाई भेट्न नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक डा.बाबुराम भट्टरार्इ अस्पताल पुगेका छन् । छोरीको हत्यारा पक्राउ गर्न माग गर्दै धर्ना बसेका निर्मलाका बुवा यज्ञराज पन्तले मानसिक सन्तुलन गुमाएपछि उपचारका लागि अस्पताल भर्ना गरिएको छ । भट्टराईले अस्पताल पुगेर बलात्कारपछि हत्या गरिएकी बालिका निर्मला पन्तका बाबुसहित परिवारलार्इ भेटेका छन्। निर्मलाका परिवारलार्इ भेटेपछि डा. भट्टरार्इले अपराधीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन प्रहरी संवेदनशील नभएको आरोप लगाए । उनले सो घटनामा प्रमाण मेट्नेलाई कारवाही गर्न माग गरे । पीडित परिवारलाई भेटेर फर्कने क्रममा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै नेता भट्टराईले गम्भीर अपराधमा भरपर्दो ढंगले खोज अनुसन्धान नभएको आरोप लगाए । cheap online nolvadex. उनले भने,‘ बर्खास्त गरेर मात्र हुँदैन । प
निर्मला पन्तका बुवा यज्ञराज पन्तको मानसिक सन्तुलन बिग्रीए पछी उनको अवस्था गम्भिर
धनगढी, ९ मङ्सीर । बलात्कारपछि हत्या गरिएकी कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया निर्मला पन्तका आमाबुवा साथै महिला अधिकारकर्मी सारदा चन्द र लक्ष्मी मल्ल लगाएत धनगढी विमानस्थलमै अलपत्र परेका छन् । निर्मलाका अामाबुवा अपराधीलाई कारबाहीको माग राख्दै गत १४ दिनयता जिल्ला प्रशासन कार्यालयको मुल गेट अगाडि धर्नामा बसेका थिए । purchase viagra usa. सोहि दिन देखि निर्मला बुवा यज्ञराजको स्वास्थ्यसँगै मानसिक अवस्था बिग्रिँदै गएपछि शनिबार उपचारका लागि काठमाडौँ ल्याउने तयारी भएको थियो । निर्मलाका बुबा यज्ञराज विमानस्थलमा बहकिन वा बर्बराउन थालेका थिए । महेन्द्रनगरबाट विमानस्थल छाड्न पुगेकी महिला अधिकारकर्मी लक्ष्मी मल्ल सारदा चन्दका अनुसार विमानस्थल पुगेपछि निर्मलाका बुवाले काठमाडौँ नजाने भन्दै चर्को स्वरले कराउन थालेपछि विमानस्थलका कर्मचारीले लैजान नमानेका हुन् । ‘हामी यतै विमानस्थलमा अलपत्र परेका छौँ मल्लले भन्नु